भीम रावलले सुदूरपश्चिममा देखाए शक्ति, एमालेका दुई तिहाई सांसदको भोट क्रस - Nepal Suchana
भीम रावलले सुदूरपश्चिममा देखाए शक्ति, एमालेका दुई तिहाई सांसदको भोट क्रस
June 8, 2021 Views: 7
काठमाडौं । केन्द्र देखि सात प्रदेशसम्म नेकपा एमालेका सांसदहरुको संरचनाको अवस्था सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मात्र माधवकुमार नेपाल खेमा बलियो अवस्थामा छ । संसदीय दलमा पनि नेपाल समूहको पार्टीभित्र भारी बहुमत छ । यसको मुख्य कारण भीम रावल हुन् ।
रावल नेकपा एमालेबाट निष्काशित भइसकेका छन् । उनी नवौं महाधिवेशनमा निर्वाचित उपाध्यक्ष हुन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशका इञ्चार्ज पनि थिए । निष्काशन गरिएपनि रावलको शक्तिमा कमी आएको छैन । उनले आज सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गरे ।
एमाले पार्टीले ह्वीप जारी गरी नेकपा माओवादी केन्द्रबाट मुख्यमन्त्री भएका त्रिलोचन भट्टले विश्वासको मत लिने क्रममा विपक्षमा मतदान गर्न भनेको थियो । तर, एमालेको माधव नेपाल समूहका १७ जना प्रदेश सभा सांसदले ह्वीप उल्लंघन गरे । यो २५ जना प्रदेश सभा सदस्य रहेको एमालेको दुई तिहाई भन्दा बढी संख्या हो ।
यसअघि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमालेबाट मन्त्री भएकालाई फिर्ता हुन केन्द्र देखि प्रदेश कमिटीले निर्देशन दिएको थियो । तर, संसदीय दलका नेता प्रकाश शाहीले अस्वीकार गरे । शाही भीम रावल निकट नेता हुन् । रावलले सुदूरपश्चिममा निकै बलियो प्रभाव बनाएका छन् । उनलाई धेरैले शेरबहादुर देउवापछि सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा बलियो नेताका रुपमा लिने गरेका छन् ।
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले सरकारमा सहभागी सबै मन्त्रीलाई पार्टी
बौद्ध धर्म गुरु नेपालकाे प्रथम खेन्पाे श्रदय गुरु टाँसी छिरिङ लामाकाे निधन
काठमाडौ । यति बेला काेभिड -१९ काेराना भाईरसले बिश्वब्यापि रुपमा
पर्यटकीय क्षेत्र बराहा ताललाई तराई सम्म जोड्ने छोटो दुरीको बराहापोखरी-पिप्ले फोक्सीङटार सडक निर्माण केही दिनमा सम्पन्न
खोटाङ । खोटाङ जिल्लामा अवस्थीत पर्यटकीय क्षेत्र बराहा ताल खोटाङको
खनालको स्वास्थ्यमा के छ समस्या ? अपोलो अस्पतालमा यसरी हुँदैछ उपचार
दुई संगठनले स्वीकार गरेको तामाङलाई अब पार्टी नेतृत्वले के गर्छ ?
“नैतिकताका आधारमा राष्ट्रपती र प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ”
पेस्तोल र गोलिको साहारामा अनेरास्ववियूको संयोजक बनेका ऐन महर !
एसपी मल्लको फेसबुकबाट अश्लील म्यासेज र तस्वीर बाहिरियो, अनुसन्धान सुरु
Bhumi Nepal Suchana House of Media
Are you going to write an individual essay or do you really wish to haveathesis statement? Some colleges haveaneed that the essays should haveathesis statement, however it's generally only write essay necessary for high school graduates.
Head: Bhumi Raj Adhikari
Phone no: 9862924599
Copyright © 2045 Newsportal
Developed BY ......